ဦးဝီရသူအပါအဝင် ဝရမ်းပြေးတွေ တော်တော်များများ လွတ်မြောက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ် – Nyang Media
အဲဒီတုန်းက ဝရမ်းပြေးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နိုင်ငံရေးတို့ ဘာတို့နဲ့ သိပ်မနွယ်ဘူးဗျ။ ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ တော်တော်များများက တမင် ‘ဟ’ ပေးသလားတောင်ထင်ရတယ်ပေါ့။ နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေက ပြေးတာများတယ်လေ . . .
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် “ ဝရမ်းပြေးကိစ္စရပ်များ လျော့နည်းပပျောက်သွားစေရန်” ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း မေးမြန်းခဲ့သည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ဦးထွန်းထွန်းဦးကို ငြမ်းမိဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်း
နိုဝင်ဘာ (၁၀)၊ ၂၀၁၉၊ ရန်ကုန်
ငြမ်း – (၅ . ၁၁ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့က လွှတ်တော်မှာမေးခဲ့တဲ့ “ တရားဥပဒေကို မထီမဲ့မြင်ပြုနေသော ဝရမ်းပြေးကိစ္စရပ်များ လျော့နည်းပပျောက်သွားစေရန် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုကြောင်း” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။
♦ UTTO – မေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ဒီလိုပါ။ ကျနော် က မန္တလေးကဆိုတော့ မန္တလေးမှာ ဦးဝီရသူအပါအဝင် ဝရမ်းပြေးတွေ တော်တော်များများ လွတ်မြောက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို မဖမ်းတာကြာတော့ ဥပဒေချိုးဖောက်ဖို့ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ မကြောက်တော့ နောက် ဆိုပိုများလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး၊ ဒီမေးခွန်းကို ဥပဒေတွေလေ့လာပြီး မေးလိုက်တာပါ။
ငြမ်း – ဦးထွန်းထွန်းဦးမေးခွန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေဆီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်မေးခဲ့ဖူးတာ သတိထားမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့် လာဖြေခဲ့တယ်။ အခုဦးထွန်းထွန်းဦးရဲ့မေးခွန်းကိုကျတော့ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးဦးမျိုးတင့် လာဖြေတယ်။ ဆိုတော့ ဝရမ်းပြေးဖမ်းတဲ့ကိစ္စဟာ ပြည်ထဲရေးအောက်က ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သာ အခြေခံကျကျ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေကို မေးခွန်းမေးသူအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
♦ UTTO – ဒီလိုပါ။ အဓိက ကျနော့်မေးခွန်းဟာ ရာဇသတ်ကြီးရယ်၊ နောက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေရယ် အဲဒီဥပဒေတွေထဲက စာသားတွေအပေါ် အခြေခံပြီး မေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီဥပဒေနှစ်ခုကို အဓိက Highlight လုပ်ချင်လို့ပေါ့။ အကယ်၍ မဖမ်းဘူး၊ တမင်တကာ လစ်လျူရှုတယ်ဆိုရင် ဒီတရားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ တရားသူကြီးတို့၊ ရဲတို့၊ ဥပဒေအကြံပေးတို့၊ နောက် အစိုးရရှေ့နေတို့ကို ပြန်ပြီးအရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မကိုကိုင်ပြီးမေးတာလေ။ အဲဒီအထဲမှာ ဘာပါသွားလဲဆိုတော့ ရဲကော၊ တရားသူကြီးကော၊ နောက် ဥပဒေချုပ်၊ အစိုးရရှေ့နေတွေရောပေါ့နော်၊ အဲဒါတွေကိုလုံးပြီး ‘တရားစီရင်ရေးဝန်ထမ်းများ’ လို့ အဲဒီပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေထဲမှာ ရေးထားတာ။ မေးခွန်းမှာကတော့ ဘယ်သူလာဖြေဆိုပြီး ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာသားကိုကြည့်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးက တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဆိုင်တယ်ထင်ပြီး တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဆီ ပို့လိုက်တာပေါ့။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းတွေရဲ့သဘာဝက ရဲလည်းပါတယ်၊ ဥပဒေချုပ်ကိစ္စတွေလည်း ပါတယ်ဆိုရင် ဌာနချင်းညှိနှိုင်းပြီးမှ ဖြေကြတာဗျ။ ဥပမာ ကျေးလက် မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပြီဆိုရင် ဆည်မြောင်းနဲ့ရော၊ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ရော၊ စည်ပင်နဲ့ရော ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးမှ ဖြေကြတာ။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုပဲဖြေမယ်ထင်ပြီး ပို့လိုက်တာပေါ့။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော့်ရဲ့မေးခွန်းထဲမှာ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြရာကုန်းကိစ္စဆိုလည်း ဗြောင်ကြီးပါတာကိုး။ အဲဒါကို တကယ်တမ်း တရားရေးက လာဖြေရမယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်ထဲရေး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဖက်ကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးဖြေရမှာဗျ။ သူ့ဘက်က အားနည်းချက်က အဲဒါပဲ။ ဟိုဖက်ကိုမမေးဘဲနဲ့၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ သူ့ရဲ့အပိုင်းလေးတင် ကွက်ပြီးလာဖြေတော့ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ထပ်ဆင့်မေးခွန်းမှာလည်း ကျနော်က အဲဒီသဘောကိုမေးတာ။ ကျနော်တို့မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုရင် တခြားမေးခွန်းတွေမှာလည်း သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနတွေ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး လာဖြေတယ်။ နောင်ဆိုရင် အဲဒီလိုလာဖြေဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလားလို့ ကျနော်ကထပ်ဆင့်မေးခွန်းမေးတာ။ အဲဒါကို သူကသဘောမပေါက်တော့ ဘေးချော်သွားတာပေါ့။
ငြမ်း – ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လကုန်ထိ စာရင်းအရ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဝရမ်းပြေးအရေအတွက် (၁၃, ၄၀၄) ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံလူဦးရေ (၅၁) သန်းနဲ့အချိုးချတွက်ကြည့်ရင် ဝရမ်းပြေး (၀ . ၀၂၆) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ လူတစ်သောင်းမှာ သုံးယောက်နီးပါးက ဝရမ်းပြေးဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လုံခြုံရေးအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ဖြစ်စေနိုင်ပါသလဲ။
♦ UTTO – ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်မေးတုန်းက ဟိုဘက်လွှတ်တော်ပေါ့နော်။ အဲဒီတုန်းက ဝရမ်းပြေးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နိုင်ငံရေးတို့ ဘာတို့နဲ့ သိပ်မနွယ်ဘူးဗျ။ ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ တော်တော်များများက တမင် ‘ဟ’ ပေးသလားတောင်ထင်ရတယ်ပေါ့။ နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူတွေက ပြေးတာများတယ်လေ။ ကျနော်က အဲဒီလူတွေကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီးမေးတာပါ။ ကျနော့်မေးခွန်းထဲမှာလည်း နာမည် သာမတပ်တာ၊ ပါပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့်လူတွေကိုယ်က ဒီဥပဒေမှာ ဒီလို ‘ဟ’ ပေးရင်၊ တမင်လစ်လျူရှုရင် သူတို့ကိုဒီလိုအရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာ တချို့တော်တော်များများက မသိကြဘူးဗျ။ အဲဒါကိုကျနော်က မီးမောင်းထိုးပြီးမေးတာပေါ့။ ကျနော့်မေးခွန်းကတော့ အဲဒါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရရင်တော့ ကျနော်တို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်ယွင်းနေတဲ့သဘော သွားသက်ရောက်တဲ့အတွက် အင်မတန်မှ စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ ဒီလို ဝရမ်းပြေးတွေများနေတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာပေါ့။ အရင်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်း ကျနော်ဖြေထားခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကို တိုင်ပင်ပြီးတော့ ကျနော်အဆိုတစ်ခု ထပ်တင်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ အဆိုက အကယ်၍အောင်သွားရင်တော့ မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ရမှာပေါ့နော်။ သို့သော် အဆိုကျတော့ ကျနော်တို့က NLD ကဆိုတော့၊ NLD က filter ပေါ့၊ စစ်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ နောက် ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်း Pass ပေးမှရတာဆိုတော့ အဆိုကလွှတ်တော်ထဲရောက်မရောက်ကို သေချာပေါက်မသိဘူးပေါ့နော်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီကိစ္စက ရင်ကြားစေ့ရေးတို့ဘာတို့နဲ့လည်း သွားပြီးညိစွန်းနိုင်တာကိုး။ အဆိုတင်ခွင့်လည်း ရချင်မှ ရမှာပေါ့။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ ဒီကိစ္စကိုလေးနက်အောင် အဆိုတင်ဖို့တော့ ဒီလွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ ကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ငြမ်း – ဝရမ်းပြေးတွေများနေခြင်းနဲ့ ရာဇဝတ်မှုထူပြောခြင်း ဘယ်လိုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှု ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပေးပါဦး။
♦ UTTO – နဂိုကမှ မူးယစ်ဆေးဝါးတို့ ဘာတို့နဲ့နွယ်ပြီးတော့ ရာဇဝတ်မှုတွေက များနေတဲ့ကြားထဲမှာ ဒီလို ထွက်ပြေးရင်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိက ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူ အတော် များများရဲ့ခေါင်းထဲမှာ ဝင်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအသိမျိုးဝင်နေခြင်းက တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် မကောင်းနိုင်ဘူးဗျ။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော်တို့က အဲဒီကိစ္စကိုဖိဖိစီးစီး ကိုင်တွယ်စေချင်လို့ ဒီမေးခွန်းကို လွှတ်တော်မှာမေးတာပေါ့။ အဲဒါ အခုမေးခွန်းမေးလို့မှ ကျေနပ်လောက်ဖွယ်အဖြေ ကျနော်တို့မရဘူးဆိုတော့လည်း ထပ်ပြီးတော့အဆိုတင်တာတို့ ဘာတို့နဲ့ ကြိုးစားဖို့ ကျနော်စိတ်ကူးထားပါတယ်။
ငြမ်း – မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားခံမပေါ်တဲ့ ငါးလောင်းပြိုင်၊ လေးလောင်းပြိုင်၊ သုံးလောင်းပြိုင် စတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ၊ ပိုင်ရှင်မပေါ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုကြီးတွေကလည်း ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းရှိနေတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဦးကိုနီအမှုက အောင်ဝင်းခိုင်လို ဖမ်းမမိတဲ့ဝရမ်းပြေးတွေကလည်းရှိနေတယ်။ ဟိုတလောက မိတယ်ဆိုတဲ့ တရားခံပြေးဦးစိုးထွန်းရှိန်ကျတော့လည်း ပြည်တွင်းမှာရှိတုန်းက မိတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်ပထွက်သွားတော့မှ သတင်းဌာနတွေကရေးလို့ တခြားနိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီး လွဲပြောင်းပေးရတယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုအချက်တွေအရဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကဲဖြတ် မှတ်ချက်ပြုချင်ပါသလဲ။
♦ UTTO – ကျနော်မြင်တာကတော့ သူတို့စွမ်းဆောင်ရည် တို့၊ ရဲတွေရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့၊ သူတို့သင်တန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းတက်ပြီးသားဗျ။ သူတို့နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပေါ့ဗျာ၊ နောက်ကွယ်က ကြီးကြီးမားမား ပတ်သက်တာတို့၊ လွှမ်းမိုးတာတို့ ရှိနေပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ ဒီလိုပဲသုံးသပ်တယ်။ သူတို့ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အင်အားစုတစ်ခုခုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ပြီး သူတို့စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့သလိုဖြစ်တော့၊ တကယ့်တကယ်တမ်းကျ စွမ်းဆောင်ရည်က မညံ့ဘူးဗျ။ သူတို့ဖမ်းချင်တယ်ဆို လွယ်တာပဲ။
ငြမ်း – အခု ရန်ကုန်အပါအဝင် နယ်မြို့ကြီးတော်တော် များများမှာ တရားမဝင် နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီ၊ ဘောလုံးပွဲလောင်းတာအပြင် တခြားလောင်းကစားတွေလည်း ရှိနေတယ်။ အထူးသဖြင့် နှစ်လုံးထီဆိုရင် အမိန့်ရ လိုင်စင်ရ လုပ်ငန်းကြီးတွေလို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် စည်စည်ကားကား လုပ်နေကြတယ်။ ရံဖန်ရံခါအရေးယူတော့လည်း နေ့စားရောင်းသူနဲ့ လက်ခွဲဒိုင်လောက်ပဲဆိုတော့၊ တကယ့်ဒိုင်ကြီးတွေ ဒိုင်ချုပ်တွေက ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူထဲက နီးစပ်သူ တွေတောင်သိနေပေမယ့် မှုခင်းတွေကိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ မသိတာ၊ အရေးမယူနိုင်တာမျိုးကိုရော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအနေနဲ့ဆို ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။
♦ UTTO – အဲဒါကတော့ဗျာ အားလုံးလည်းသိကြပါတယ်။ တော်တော်များများက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူကိစ္စတွေနဲ့ နွယ်နေတာလေ။ ကျနော်တို့မန္တလေးမှာတော့ ရန်ကုန်လောက်တော့မများဘူးဘူး။ သို့သော် ရှိတယ်။ တစ်နေ့က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့။ ကျနော့်ကို မဲဆန္ဒရှင်တစ်ယောက်ကလာပြောတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကယ်ပွဲစားဝိုင်းမှာ ၊ လမ်းဘေးတင်၊ ဖဲလား ဒိုးဇက်လားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ သိန်းဂဏန်းထိလောင်းကြတယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ သူက အဲဒီအပိုင်စခန်းကို သွားတိုင်တယ်။ စခန်းကနယ်ထိန်းက ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဖမ်းမလို့လာတဲ့အချိန်မှာ ဖမ်းခါနီးကျဖုန်းဝင်လာတယ်။ သူတို့စခန်းမှူးက ဆက်တယ်ပေါ့နော်၊ မဖမ်းဖို့။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့။ သူကနောက်ကွယ်မှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူကိစ္စတွေ နွယ်နေတာ။ ကျနော်ထင်တယ် အဲဒီလောင်းကစားကိစ္စက နှိမ်နင်းရတော်တော်ခက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနကလို ဗြောင်လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စမျိုးကြီးကိုတော့ ကျနော်တို့တားရမှာပေါ့။ ဒါက တိုင်းပြည်ပုံရိပ်လည်းကျတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလည်း ပျက်ယွင်းသလို ဖြစ်စေတယ်ပေါ့။
ငြမ်း – တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တစိုက်မတ်မတ်ပြောတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း တရားဥပဒေကို စောင့်ရှောက်ရမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်နှိုက်က ခုလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ဒါတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ။
♦ UTTO – အဲဒါကတော့ နောက်ဘိတ်ဆုံး အခုကျနော်တို့ ပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆီကို ရောက် သွား တော့မှာပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပြည်ထဲရေးက ကိုယ့်လက် ကိုယ့်ခြေ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဓိက ပြဿ နာဖြစ်နေတာက အဲဒါပဲ။ ပြည်ထဲရေးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တပ် ကပဲခန့်ရတယ်။ နောက် လက်ရှိ တပ်ကအရာရှိကြီးတွေကိုပဲ ဝန်ကြီးခန့်ရတာဆိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သူ့ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်း ကျနော်တို့ အစိုးရဘက်က မလွှမ်းမိုးနိုင်တာဟာ အဓိကအချက်ပဲဗျ။ နောက်ဘိတ်ဆုံးတော့ အဲဒီကိန်းဆိုက်သွားမှာပဲ။ ကျနော်တို့ ဒီအခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်ပြီး ပြည်ထဲရေးကို အရပ်သားအစိုးရလက်အောက် ရောက်အောင်သွင်းနိုင်မှ ကိစ္စတော်တော်များများ ပြေလည်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အခုကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ့်အထဲမှာ အဲဒီအချက်လည်း ပါပါတယ်။
ငြမ်း – ခုနက လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းမေးတဲ့ကိစ္စ ပြန်မေးပါရစေ။ အဲဒီနေ့က ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးရဲ့ ဖြေကြားသွားတဲ့အဖြေကို ကျေနပ်အားရမှု ရှိပါသလား။
♦ UTTO – ကျွန်တော်တို့ မေးခွန်းတွေရဲ့သဘာဝအရ ဘယ်ကလာဖြေပါဆိုပြီး မေးခွန်းရှင်က ရေးလို့မရဘူးလေ။ မေးခွန်းရဲ့ သဘောသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ဆိုင်မယ်ထင်တဲ့ဆီကို ပို့ရတာ။ သို့သော် အဲဒီပို့ခံရတဲ့ဌာနက သူတင်မကဘူး တခြားဌာနတွေပါ ဆက် စပ်တယ်ဆိုရင် သူတို့အချင်းချင်း လှမ်းမေးပြီးတော့ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဥစ္စာမှာကျတော့ အဲဒီတရားသူကြီးက သူ့ဆိုက်ပဲ သူလာဖြေသွားပြီး ဟိုဘက်ကိုလှမ်းမေးတာတို့၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတို့ မရှိတဲ့ပွိုင့်လေးပဲ ကျနော်က ကျေနပ်အားရခြင်း မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ သူဥပါဒ်ကင်းအောင်လို့ သူ့တရားရေးဆိုက်ဘက်ပဲ မဲတင်းပြီးဖြေသွားတယ်ပေါ့။ ကျနော်က အဲဒီလိုပဲမြင်တယ်။ သို့သော် ခြုံပြောရရင်တော့ အားရကျေနပ်မှုတော့ မရှိဘူးပေါ့။
ငြမ်း – လွှတ်တော်တွေမှာ မေးခွန်းမေးကြတဲ့အခါ လာရောက်ဖြေဆိုကြတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ တချို့အဖြေတွေဟာ လိုရင်းကိုတိုက်ရိုက်မရောက်ဘဲ ဝေ့ဝိုက်ပြီး တစ်ခါတလေမှာ မေးခွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယရှိရလောက်အောင် ဖြစ်နေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
♦ UTTO – အဓိကအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနယန္တရားတွေ တော်တော်များများက ပြောရရင် ခေါင်းကပြောင်းပြီး ကိုယ်ကမလိုက်သလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော် လည်း မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးဖူးပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းဆိုလည်း ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူလာဖြေတာ အဲဒီလိုပဲလေ။ ကျနော်က ဒီဟာတွေလျော့နည်းပပျောက်သွားအောင် ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေမှန်ကိုမေးတာ။ သူကကျတော့ ဟိုတုန်းကလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ လက်ရှိလုပ်နေတာတွေလျောက်ပြောနေတာ။ အဲဒီလို ဝေ့ပြီးတော့၊ ကိုယ့်မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ဝေ့ပြီးဖြေနေတော့ လိုရင်းမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ တော်တော်များများ ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း အဲဒီအတိုင်းချည်းပဲ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဆိုလိုတဲ့သဘောက ခေါင်းကသာ အားတက်သရောသွားနေတာ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဗျူရိုကရေစီယန္တရားကတော့ ကနေ့ထက်ထိ တရွတ်တိုက်နေတုန်း။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း တိုင်းပြည်က ကိုယ်ရွေ့ချင်သလောက် မရွေ့ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုတော့ ကျနော်မြင်တယ်။ သူတို့ကတော့ ခုနကပြောသလို တိတိကျကျ ရေရေရာရာ ဖြေကြတာနည်းပါတယ်။
ငြမ်း – တခြားဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
♦ UTTO – ကျနော်ကတော့ လူထုကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီတိုင်းပြည်အပေါ်မှာရော၊ ကျနော့်မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုရော မပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး မေးသင့်မေးထိုက်တာ ကျနော်ဆက်မေးနေမှာပဲ။ အခုလည်း လက်ရှိအချိန်ထိ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၅) ခု မေးပြီးပါပြီ။ အဲဒါတစ်ခုလုံးကလည်း အတူတူပဲ။ ဒေသတွင်းတို့၊ ဌာနတစ်ခုချင်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါင်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ၊ ပေါ်လစီဆန်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကိုလည်း ကျနော်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သက်တမ်းအတွင်းမှာ မေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက် နောင်ကိုလည်း သူတို့ရဲ့အဖြေ အားရကျေနပ်ဖွယ်မရှိရင်တောင် ကျနော့်တာဝန်အရတော့ ဆက်ပြီးမေးနေမှာပဲ။ အခုလည်း တစ်ခုတင်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်းတင်ပြဖို့ ပြုစုနေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – (ဦး) Tun Tun Oo facebook